Betty Barclays Beauty ဧဒင် soft ရေချိုးခန်းရေမြှုပ် 200 ML
₼ Azerbaijani အဘိဓါန် manat
֏ Armenian အဘိဓါန် DRAM
BGN ဘူဂေးရီးယား lev
R ကို $ ဘရာဇီးအစစ်အမှန်
$ နှင့်အတူ ကနေဒါဒေါ်လာ
ZL ပိုလနျ Zloty
RON ရိုမေးနီးယား leu
TMT တခ်မ manat
UZS အဘိဓါန် Uzbek- soums
₴ ယူကရိန်း hryvnia
English Русский Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Samoan Scottish Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sudanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu
1 798 ပွတ်။
စိတ်ဝိညာဉ်-aromaticheskkuyu မြှုပ်ရေချိုးခန်းဘက်တီဘားကလေးတင့်တယ်ဧဒင်ဥယျာဉ်ကိုတွေ့ကြုံခံစား! ဒဏ်ငွေ creamy ရေမြှုပ်ညင်ညင်သာသာအရေပြားကိုဆေးကြောပါကအချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်တောက်ပနှင့်ပျော့ပျောင်းသောကြောင့်ထွက်ခွာမည်။ ဘက်တီဘားကလေးခြင်းဖြင့်လှပသောဧဒင်ဥယျာဉ် - သဘောသဘာဝနဲ့အညီအသက်ရှင်ရန်ကိုချစ်သူကိုသဘာဝနဲ့ရင်ခုန်စရာမိန်းမတို့အဘို့မွှေးကြိုင်။ အဆိုပါ curvy ဖွဲ့စည်းမှုတောက်ပအသီးနှင့်ထိပ်တန်းမှတ်စုများနှင့်အတူကစတင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးဝိဇ္ဇာအတတ်အားပန်းပွင့်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရသာနှင့်ဆင်တူနေသည်။ အဆိုပါအခြေခံတဲ့ creamy ပျော့ Chord ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်တီဘားကလေးတင့်တယ်ဧဒင်နူးညံ့နေတဲ့ပန်းပွင့်ကဲ့သို့သင်တို့ထုပ်နှင့်ပန်းပွင့်နှင့်အစိမ်းရောင်ချုံ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအနံ့ရသောဧဒင်ဥယျာဉ်၏ဥယျာဉ်မှလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ နေ့စဉ်အသက်တာ၏ဖိစီးမှုကိုအိပ်မက်မက်ခြင်းနှင့်မေ့လျော့ရန်သင့်အားဖိတျချေါထားကြောင်းရေမွှေး!
ရေ (Aqua), ဆိုဒီယမ် LAURETH sulfate, BUTANE, glycerin, တံစို့-7 GLYCERYL COCOATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, အမွှေးအကြိုင် (PARFUM), ပရိုပိန်း, PPG-1-တံစို့-9 LAURYL GLYCOL အီ, ဆိုဒီယမ် BENZOATE, ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်, Coco-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, citric အက်ဆစ်, PERSEA GRATISSIMA (ထောပတ်သီး) OIL, BENZYL salicylic, BUTYLOCTANOL
Ean-Code ကို: 4011700362172
Lauder RE-NU Ultra အရောင် CR SPF15 ဖျော့ ALM
12 021 ပွတ်။
ချိုးငှက် Seif SHEABUTTER2X ကို 100, G
1 004 ပွတ်။
TRISA DISP ZAHNPA INT CARE Duo + စွမ်းဆောင်ရည် WHI Duo7Duo
5 185 ပွတ်။
CLINIQUE ပင်ပိုကောင်း Refresh ဓါတ်ကိုပြန်လည် & rep WN76 အောင်
4 179 ပွတ်။
ဤတွင်ဆေးဝါးဌန်ဆွစ်ဇာလန်တစ် catalog ဖြစ်ပါသည်
ပံ့ပိုးမှု 24 / 7
သာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်နှင့် 1000 ယူရိုထက်မပို၏ပမာဏအတွက်ရုရှားကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု။
ရှိသမျှသောလောကီနိုင်ငံများ၌ကျန်းမာရေးပေးပို့ဘို့ဆွစ်ဇာလန်ကုန်စည် catalog ။
© 2011-2019 ။ ဆေးဆိုင် Swiss-Apteka.Com ဆွစ်ဇာလန်ကနေမေးလ်ဖြင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု